musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Boeing inozivisa shanduko kuBhodi yayo yeVatungamiriri
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Boeing inosarudza David L. Joyce kuBhodi revatungamiriri; Admiral Edmund P. Giambastiani Jr. kuenda pamudyandigere kubva kuBhodi.
David L. Joyce akasarudzwa kuBoing's Board of Directors.
Admiral Edmund P. Giambastiani Jr. ari pamudyandigere kubva kuBoing's Board of Directors.
Shanduko kuBhodi yeBoing yeVatungamiriri inoshanda nekukasira.
Boeing Company board revatungamiriri nhasi vazivisa kuti David L. Joyce asarudzwa kubhodhi, inoshanda nekukasira. Iye achazoshanda kumakomisheni eAerospace Kudzivirirwa uye Ekubhadhara. Boeing board nhasi yazivisawo kuti Admiral Edmund P. Giambastiani Jr. azivisa kambani kuti achasiya basa pabhodhi pakupera kwa2021.
David L. Joyce akasarudzwa kuBoing's Board of Directors
Joyce ane makore makumi matanhatu nemasere, akasiya basa kubva General Magetsi (GE) semutevedzeri wasachigaro muna 2020, kwaakashandawo semutungamiri uye CEO weGE Aviation kubva muna2008 kusvika 2020. Munguva yake yemakore gumi nemaviri hutungamiriri hweGE chikamu chikuru, Joyce akatungamirawo mutengi uye chigadzirwa rutsigiro kune anopfuura 12 epasi rese injini uye 19,000 ndege dzevatengi uye akatarisa kuiswa kweindasitiri-inotungamira chengetedzo manejimendi system kuGE Aviation.
Ane makore makumi mana GE veteran, Joyce akabatana GE Aviation muna 1980 semugadziri wechigadzirwa uye akapedza makore gumi nemashanu achigadzira nekuvandudza enjini dzeGE dzekutengesa nemauto, asati ashumira munzvimbo dzakasiyana siyana dzehutungamiriri muEGE Aviation, kusanganisira mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye maneja mukuru weCommerce Engines. Joyce akawana zvese Bachelor yeSainzi uye degree raTenzi mune zvemainjiniya kubva kuMichigan State University uye anobata tenzi mune bhizinesi mari kubva kuXavier University.
"David Joyce anozivikanwa weindasitiri yemuchadenga mutungamiri anounza ratidziro yehutungamiriri hwekuchengetedza, hunyanzvi hweinjiniya uye kugona kwekuita kubhodhi redu," akadaro. Boeing Sachigaro Larry Kellner. "Achapa kuraira uye nhungamiro yakakosha zvichibva pane zvaakaona zvakanyanya."
Joyce inhengo yeNational Academy yeUinjiniya, uye ndiye anogamuchira iyo National Defense Industrial Association's James Forrestal Indasitiri Yehutungamiriri Mubairo uye iyo American Society yeMidziyo 'Mhedzisiro yeKufambira Mberi kwekutsvaga. Kubva 2010, akashanda kuBhodi reTrasti reXavier University.
"Boeing ichabatsirikana neruzivo rwakadzama rwaDavid Joyce uye nehukama hwakawanda mumaindasitiri, "akadaro David Calhoun, purezidhendi weBoing uye CEO, uye nhengo yebhodhi revatungamiriri. "Chiitiko chaDavid chekushandura mabhizinesi uye kutarisisa mhando uye kuchengetedzeka muaerospace indasitiri kunowedzera kusimbisa bhodhi redu."
john jenkins anoti:
Svondo 1, 2021 pa 02: 46
Mr. Joyce isarudzo yakanaka kwazvo neBoeing hutungamiriri. Dzidzo yake uye ruzivo zvichamugonesa kuti ape mukana kuBoing's zvine hungwaru uye zvine hungwaru kuita sarudzo. Ini ndinorumbidza Boeing nesarudzo iyi, kusiyana nevakawanda nhengo dzeBhodi sarudzo dzinoitwa chete yekusimbisa chiito. Kuita kwemakambani eAmerica kwakakosha kuchengetedza hupfumi hwedu uye kuchengetedzeka kwenyika.